Isitatimende seGAAPP Mayelana Nobulungiswa Kwezenhlalo Nobuzwe - i-GAAPP
Isitatimende seGAAPP Mayelana Nobulungiswa Kwezenhlalo Nobuzwe
Ikhaya>Isitatimende seGAAPP Mayelana Nobulungiswa Kwezenhlalo Nobuzwe
Isitatimende seGAAPP Mayelana Nobulungiswa Kwezenhlalo NobuzweIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-23T18:02:20+01:00
Njengenhlangano yomhlaba wonke engeyona yenzuzo yokufundisa iziguli kanye nenhlangano yokukhuthaza, i-GAAPP izibophezele ekuzibophezeleni kwezenhlalo nakwezenhlalo futhi isekela labo abafuna umphakathi onobulungisa. I-GAAPP igcina imigomo yokuthi bonke abantu badalwe isithunzi nokulingana nokuthi wonke amalungu anesibopho sokuthatha isinyathelo, ngokuhlanganyela nangokuhlukana, ukukhuthaza nokuxhasa ukuhlonishwa komhlaba wonke nokugcinwa kwamalungelo abantu kanye nenkululeko eyisisekelo yabo bonke abantu ngaphandle kokwehlukaniswa ngokohlanga , zocansi, ulimi, inkolo noma imvelaphi yobuzwe.
I-GAAPP igcizelela isidingo sokuqeda ngokushesha ukubandlululwa ngokobuhlanga ngazo zonke izinhlobo zayo kanye nokubonakaliswa emhlabeni wonke nokuqinisekisa ukuqonda nokuhlonishwa kwesithunzi somuntu. Bonke abantu bayalingana phambi komthetho futhi banelungelo lokuvikelwa ngokulinganayo ngaphansi komthetho kukho konke ukubandlululwa kanye nakunoma yikuphi ukugqugquzelwa kobandlululo.
Ukuqwashisa ngezifo zomoya kanye nokwaliwa nokungezwani komzimba nokwenza ngcono ukufinyelela kwezokunakekelwa kwezempilo kungezinye zezinqubomgomo zethu ezibekwe eqhulwini. Izinkinga zenhlalo nezomnotho zithinta iziguli emazweni amaningi, eziqokonyiswa yi COVID-19 usizi.
Masibumbane njengamalungu e-GAAPP ukuthola izixazululo ezithuthukisa ukulingana, hhayi kuphela ekunakekelweni kwezempilo kepha kuzo zonke izici zokuphila.
Sizobheka ukuthi singalisebenzisa kanjani kangcono izwi lethu ukusiza labo abafanelwe ukulingana, silalele labo abathukuthele nabalimele, futhi silwele ukuhlangana ukuze sibe nekusasa elingcono - labo bonke.